Tag: imepụta | Martech Zone
Otu Otu Otu Okike Wulitere Ihe Nlekọta Ndị Isi Iji gosipụta Uru Ha bara na C-Suite
Fraịde, Jenụwarị 22, 2021 Fraịde, Jenụwarị 22, 2021 Molly Clark
Ihe okike okike di elu di nkpa nye ahia dijitalụ. Ọ bụ mmanụ ọkụ maka ịzụ ahịa akpaaka, mgbasa ozi dijitalụ, na mgbasa ozi mmekọrịta. Agbanyeghị, n'agbanyeghị oke ọrụ ọdịnaya okike na-arụ, ịnweta ụlọ ọrụ nwere mmasị na ọrụ na-abanye na ya bụ ihe ịma aka. Fọdụ ndị ndu na-ahụ mkpirisi mbụ, ma ọtụtụ na-ahụ nsonaazụ ya, mana ole na ole maara ihe na-eme n'etiti. E nwere ọtụtụ ihe na-aga n'azụ Mpaghara: prioritization nke oru ngo, guzozie nke imewe ihe onwunwe,
COVID-19 agbanweela ụwa ahịa. N'etiti mgbochi ndị na-ekewapụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ewugharị usoro oge nke omume ndị ahịa n'otu ntabi anya. N'ihi ya, ihe karịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ụdị kọwapụtara mbelata nke ego ha nwetara. N'agbanyeghị nke ahụ, ọbụlagodi n'oge ọgba aghara ahụ, ndị America nọ na America ka gosipụtara ọtụtụ mgbasa ozi 10,000 kwa ụbọchị, ebe ọtụtụ ụdị bidoro onyinye ha na gburugburu ọhụụ ọhụụ ma lelee anya iji kesaa Share of Voice.
Kedu ka teknụzụ dijitalụ si emetụta ihe okike okike
Otu n'ime isiokwu m na-anụ banyere ọganihu na teknụzụ bụ na ọ ga-etinye ọrụ n'ihe egwu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ eziokwu n'ime ụlọ ọrụ ndị ọzọ, enwere m obi abụọ na ọ ga-enwe mmetụta ahụ n'ime ahịa. Ndị na-ere ahịa na-ejupụta ugbu a ka ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ajụ ase na ọwa na-aga n'ihu na-abawanye ebe ahịa ahịa na-adịgide adịgide. Teknụzụ na-enye ohere iji rụọ ọrụ ugboro ugboro ma ọ bụ ọrụ aka, na-enye ndị na-ere ahịa oge ka ukwuu
Ihe omuma ihe omuma a sitere na Marketo bu ihe amamihe karia ịkekọrịta. Ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ndị ọkà mmụta banyere ọdịdị mmadụ kwenyere ogologo oge na ọdịiche dị n'etiti aka nri na n'akụkụ aka ekpe nke ụbụrụ. Akụkụ aka nri nke ụbụrụ gị bụ maka okike, ebe akụkụ aka ekpe na-ejikwa nkọwa na mmejuputa. Akụkụ aka ekpe bụ nyocha mgbe akụkụ aka nri bụ nka. Dịka onye na-azụ ahịa, ụdị onye na-eche echiche ị na-eduzi mkpọsa ị na-emepụta.
Emezighị emezi Blogging Meji M Kwesịrị Izere
Saturday, July 5, 2008 Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Douglas Karr
N'ehihie a, m nọrọ awa ole na ole na Barnes na Noble. Barnes na Noble dị nso na ụlọ m, mana ekwesịrị m ikweta na oke ala ka ahaziri nke ọma yana akwụkwọ dị mfe ịchọta. Anọ m na-eje ije n'akụkụ wara wara 'mgbe niile na Barnes na Noble na-achọ kama iji oge na-agụ ihe. Ka o sina dị, eburu m magazin kachasị amasị m, Practical Web Design (aka .net) wee mechaa bulie akwụkwọ Darren na Chris, Nzuzo maka ịde blọgụ